Eri arọ Isiokwu - Zhuji Feihu Textile Machinery Co., Ltd
Ị nọ ebe a : Home >ozi >News >ỌZỌ NEWS
Eri arọ Isiokwu
Oge: 2019-02-16 Hits:
ọ kasị ibu usoro ezipụta ogologo nke na eri na kilomita chọrọ iji tuo 1 kilogram. Ya mere, a ukwuu ibu nọmba (gosiri na American ọkọlọtọ site afo wt) na-egosi a thinner, mma eri. The American ọkọlọtọ nke na eri ibu e kuchiri si Gunze agụ ụkpụrụ nke Japan nke na-eji abụọ nọmba iche site na a na-atụ ịsụ na ịgba ọhịa. The mbụ nọmba kwekọrọ na wt nọmba nke na eri na nke abụọ nọmba egosi otú ọtụtụ nke na-adị eriri e ji ide okokụre eri. Ọ bụ ọsọ kechie atọ nke na-adị n'otu ibu-eme ka otu eri, ezie na nke a abụghị a iwu chọrọ na US ọkọlọtọ (nke bụ ya mere obere ihe ọmụma).
Light 60 wt #60/3 bobbin ma ọ bụ appliqué
Thin 50 wt #50/3 bobbin ma ọ bụ appliqué
Ịgachi 40 wt #40/3 Quilting
upholstery 30 wt #30/3 ji achọ
arọ 20 wt #20/3 ji achọ
A denier ibu nkọwapụta na-ekwu otú ọtụtụ grams 9,000 mita nke na eri weighs. N'adịghị ka ndị nkịtị eri ibu usoro, nke ukwuu denier nọmba, na thicker na eri. The denier ibu usoro, dị ka ndị nkịtị ibu usoro, nwekwara ezipụta ọnụọgụgụ nke na-adị kpọmkwem ibu nke e ọbọp ọnụ na-eme ka okokụre eri.
Tex bụ uka na grams nke 1,000 mita nke eri. Ọ bụrụ na 1,000 mita weighs 25 grams, ọ bụ a tex 25. Ibu tex ọnụ ọgụgụ ndị bụ arọ eri. Tex a na-eji ihe ọtụtụ ndị na-na Europe na Canada.
Ụfọdụ na eri na-emepụta, karịsịa ndị na-amị nnọọ mma silk eri, itinye ha akpịrịkpa nke eri n'ihe eji "aughts" ma ọ bụ zeroes (bụghị n'adịghị efù eji na odomo nha nke nkpuru chaplet). N'ime a nyere emeputa \_ 's ụdịdị dị iche iche, a elu "ọnweghị ọnụ" na-egosi a mma eri: a na-emekarị nyere ka a otu ọbula sochiri a na-atụ ịsụ na ịgba ọhịa na a efu— ọmụmaatụ, 3/0 na-egosi a atọ-bula na eri ma ọ bụ a na eri size "000", ma nke a na nọmba naanị nwere uru mgbe tụnyere ndị ọzọ eri na-emepụta site n'otu emeputa: onye emeputa \_ 's 4/0 ga-enwe mgbe nile ọzọ mma karịa na otu emeputa \_ 's 2/0, ma ga-apụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na tụnyere 4/0 nke ọzọ emeputa. The bula ọnụ ọgụgụ mere bụ adabara akakabarede ma ọ bụ tụnyere ndị ọzọ ihe-generalized ibu akpịrịkpa, ezie na ọ bụ ihe na-emekarị iwere.
Previous : Kirby \_ 's Epic Yarn